Gangster, mushandirwi, tsotsi, mupoteri uye munyori. | Zvazvino Zvinyorwa
Gangster, mushandirwi, tsotsi, mupoteri uye munyori.
Mufananidzo naJosé Giovanni.
Munhoroondo yese takave nezviitiko uko hupenyu hwemumwe munyori hwakapfuura chero hunyorwa hwekunyora kuti ivo pachavo, kana vamwe, vangadai vakagadzira. Hupenyu huri kure kure nemufananidzo wemunyori mujeri kwemaawa nemaawa munzvimbo yake yekusika, kure nechero chakaipa uye chakanangana netsika nemabhuku
Zvine musoro, kunyange hazvo paine mhando dzezvisikwa izvi pakati pevanyori dzakapihwa nevanhu, ndinofanira kubvuma kuti hazvisi izvo zvakajairwa kunyangwe ichi chifananidzo chingave chakapararira pakati pemafungiro enharaunda yedu.
Zvisinei, Ini ndinofunga kune vashoma vanyori vakave nehupenyu uye nhoroondo yavo seiya yechiFrench yeCorsican yakabva José Giovanni. Hupenyu hunopokana zvakanyanya kune izvo zvinogona kufungidzirwa uya wemunyori uyo, kwenguva zhinji yehuvepo hwake, aibatanidzwa mukuuraya, kubatana, kubiridzira uye mhosva muEurope yakatambudzika pakupera kweHondo Yenyika II.
José Giovani, kutanga kwezvose, Akazvarwa muParis muna Chikumi 22, 1923 uye vabereki vake, vanobva kuchitsuwa cheCorsica, vakamubhabhatidza nezita raJoseph Damiani yaive, saka, rake chairo zita uye zita.
France payakatorwa neHitler's III Reich, wechidiki Giovanni akaverenga Aingova namakore gumi nemanomwe ekuberekwa, akatanga basa rake rekupara mhosva iro rakagara mukati memakore ekutapa kweGerman uye makore anotevera. Naizvozvo akabatana nechikwata chematsotsi iyo yakatora nharaunda yeParis ye Pigalle.
Nhengo dzeboka iri saAbel Damos vaive panguva imwechete zvidimbu mukati mecogwheel ye Gestapo ChiGerman mubazi rayo munyika yeGallic. Saka, iyo "jongwe" ndiyo nzira iyi chikamu cheiyo Gestapo akabatsirwa neboka rematsotsi iro Giovanni aive pamwe nevamwe, kuwedzera hutongi hwake pakati pevagari. Nekuda kweizvozvo, mapoka aya akawana "marque patent" yekuenderera nekusarangwa zvachose pavanenge vachiita zvakaipa zvavo.
Nhengo dzese, nenzira iyi, vakave vabatsiri vemaGerman uye kunyangwe, vazhinji, vaive pamusoro pekutambudzwa kwe vapanduki, MaJuda kana vanhu vanopokana nehutongi. Munguva yeaya makore akaomarara uye akaomarara Giovanni vakapinda muchisimba zvemarudzi ese uye mukuponda kwemukuru webasa chitoro chinonzi Haïm Cohen. Zvisinei, mhosva inonyanya kuzivikanwa yaive yekubiridzira uye kuuraya kwehama Jules naRoger Peugeot.
Nekuuraya kaviri uku kwakaitika muna 1945 uye panguva yekuferefetwa kweizvi muna 1948, akasungwa akatongerwa rufu. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mugumo wake zvakamutungamira kuenda kugillotine, akakwanisa kutiza kubva kunjodzi yakadaro nekuti Mutungamiri Vincent Auriol, mukushandisa chinyorwa 17 cheFrench Constitution, mutongo wake werufu wakachinjirwa kumakore makumi maviri echibharo.
Kunyange zvakadaro, protagonist wedu, mukati memakore ake semusungwa, Aivewo chikamu chekushamisa kwekuedza kwekutiza kubva kujeri reLa Santé kuburikidza nemumwenje uyo pakupedzisira usina kumutendera kuti atize kubva mutirongo.. Akambobuda mutirongo uye nekuda kwemutongo wake kuenda kubasa rekumanikidzirwa, aibvisa zvimbambaira zvaive chikamu cheyainzi yaHitler rusvingo rweAtlantic pamahombekombe eNormandy nenzvimbo dziri padyo navo
Yakanga iri panguva iyi mushure mekutenda kwake, aine makore makumi matatu nematatu, paakatanga basa rake semunyori achinyora "Le Trou ", bhuku rake rekutanga rakanangana nekuyedza kwake kutiza nevamwe vasungwa. Sezvineiwo, raive gweta rake amene akawana bhuku iri rakapedzisira kugadziriswa.
Iri bhuku rekutanga rakateverwa na: "Classe tous risques", "Nharaunda"Uye" Le Deuxième Souffle »". Ivo vese, pamwe ne "Le Trou", vakaunzwawo kune yakakura screen. Nekuda kweizvi, zvese zvinotaurwa, aive nematanho ake ekutanga semunyori wezvepasi munyika yeunyanzvi hwechinomwe, nekudaro achiva munyori ane zvakawanda.
Mumakore ake ekupedzisira ehupenyu akazvipira kushanyira vechidiki vasungwa mumajeri eFrance kuti avanyengetedze nekuvakurudzira mukudzokazve kwavo achizviratidza semuenzaniso kuratidza kuti ramangwana rinogona kuitika kunze kwekuparwa kwemhosva.
Giovanni zvirokwazvo ndiye akabatwa panguva yake uye nenguva iyo kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nevehukama pamwe nehondo, kwakatora varume vazhinji mukunyanyisa kusinganzwisisike kana kutenderwa mumazuva edu.
Hazvingave zvakanaka kwatiri, nekudaro, kutanga kupomera Giovanni nezve ake apfuura, kunyangwe, zvine musoro, kuti izvo zvaakaita zvaipomera. Pane kupokana, ini ndinosarudza kukoshesa kuti hupenyu uhu husina kuremekedzwa hungadai hwakakonzera iro rinonyatsoremekedzwa basa rekunyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Gangster, mushandirwi, tsotsi, mupoteri uye munyori.
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Ndakaverenga Giovanni uye ndakaifarira. Ndinogara nemutsara wako wekupedzisira.
Mhoro Mariola, hazvo, ndakaifarira zvakanyanya. Ichokwadi ndechekuti ini ndinofunga isu tine zvakafanana zvinyorwa zvekuravira lol hug.
Zvakanaka, ivo vakafanana chaizvo, heh, heh ...
Alberto Fernandez Diaz akadaro
Yakanga yave nguva kubva pandakaverenga chero chinhu chako. Chinyorwa chinonakidza kwazvo. Ndakanga ndisingazive nezve kuvapo kwechimiro ichi. Hupenyu hunobva mufirimu kana inoverengeka, ichokwadi chose. Kunyangwe kusiya ndima yekunyora, kune vamwe vanhu vane hupenyu hungave hwakakodzera cinema nebasa rakanyorwa uye kuti hapana kana munhu anoziva.
Ini ndaisaziva kuti Gestapo yakatora mukana wezvikwata zvematsotsi kudzora zviri nani maFrance (uye kuti ndinofarira Hondo Yenyika II). Ini ndinofungidzira kuti vashoma vanhu vanoziva. Zvinotyisa uye zvakamonyoroka, asi zvinobatsira kwazvo mapato ese ari maviri. Vanhu vanosemesa.
Ehezve, hazvishamise kuti mumwe munhu ane chimiro senge José Giovanni azvidzorezve (ndinofunga kudaro). Uye zvakanyanya kushomeka ndeyekuti anozvipira iye kunyora.
Ngatione kana ndichigona kuona mafirimu anoenderana nemabhuku ake (ndinofungidzira kuti anofanira kunge akanaka) uye verenga mamwe acho.
Kwaziso kubva kuOviedo.
Pindura kuna Alberto Fernández Díaz
Mabhuku ekuzvibatsira. Ivo vanonyatso batsira kana ivo vari fiasco?
5 akanaka mabhuku evadiki